सम्झनामा धनिरामः अखिल (क्रान्तिकारी) को संयोजक, जनएकताको सम्पादकदेखि शिक्षामन्त्रीसम्म... - Jhilko
सम्झनामा धनिरामः अखिल (क्रान्तिकारी) को संयोजक, जनएकताको सम्पादकदेखि शिक्षामन्त्रीसम्म...
बुबाः हरिप्रसाद पौडेल
श्रीमतीः गंगा बेलबासे
जन्मः बि.सं.२०२२ कार्तिक ४
बासोबासः माडी चितवन
जन्मस्थानः दरौ गा.वि.स., कुन्चेवारी, स्याङ्जा
धनिराम पौडेल २०३७ सालदेखि वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रिय थिए । मोहनबिक्रम सिंह र निर्मल लामाहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा (चौथो महाधिवेशन) को बिद्यार्थी संगठनको कार्यकर्ता हुँदै राजनीति सुरु गरेका उनी २०३९मा विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला सदस्य, २०४१ मा केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०५१ मा तात्कालिन नेकपा (एकताकेन्द्र) विभाजन पछि अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय संयोजक समेत चुनिएका थिए ।
२०४२ सालमा नेकपा (चौम) को सदस्यता लिएका उनी २०४४ सालमा पार्टीको चितवन जिल्ला सदस्य भए । २०४७ सालमा माडीको सितलपुरमा भएको एकता महाधिवेशनका प्रतिनिधि समेत रहेका उनी अखिल नेपाल जनवादी युवा लिगका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य समेत थिए । २०५१ को पार्टी विभाजन पछि निर्मल लामा र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई साथ दिएका उनी त्यसयता लगातार पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहँदै आएका थिए । बिगतमा लामो समय उनले पार्टीको बैचारिक मुखपत्र जनएकता साप्ताहिकको सम्पादक भई पत्रकारिता समेत गरेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट स्नातक, शहीद स्मृति क्याम्पस चितवनवाट आईए र माडी माविवाट एसएलसी गरेका स्व. पौडेलका दुई छोरी छन् । सादा र सरल जीवनशैली अपनाउँदै आएका पौडेलले हाल स्व. दिवाकर भुसालको स्मृति पुस्तकको सम्पादन गरिरहेका थिए । उनकोको आज बिहान करीब ७ बजे हृदयघातका कारण असामयीक निधन भएको छ । मृतक पौडेलप्रति झिल्कोडटकम परिबार हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछ !
अल्पकालीन कारोबारीले नाफा बुक गर्दा चौंथो दिन विक्रीमा प्रेसर हुँदा करेक्सन भएको...